Prisma waxay sawiradaada ku badali doontaa miiraheeda farshaxan ee xiisaha leh | Abuurista khadka tooska ah
Ku beddelo sawirradaada miirayaasha farshaxannimada leh ee Prisma
Prisma ayaa goor dhaweyd loo sii daayay keydka warbaahinta Android ka dib markii ay dhowr toddobaad ku qaadatay iOS. Waxay ku jirtaa macruufka halkaasoo ay ka beddeshay xaqiiqda sida aan u aragno sawirrada si ay awood ugu yeelato inay beddesho qabashadaas ku dhowaad hawl yar oo farshaxan ah haddii aan awoodno inaan yeelano wax-abuur yar iyo mala-awaal.
Waana in Prisma ay u timid inay joogto oo ay ku siiso awoodda isbeddelka dhammaan sawirrada iyo sawirrada aad ku haysato bilaash. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ka hesho barnaamijkan ayaa ah inaad haysato qalab Android ama IOS ah, maadaama laga heli karo nidaamyadan. Imaatin weyn oo aan ka faalooneyno qaar ka mid ah faahfaahintiisa hoos.
Prisma waa barnaamij dib-u-hagaajin sawir ah oo ka soo baxa barnaamijyada kale ee appliqué filter sababtoo ah sabab fudud, waana taas inta ay badanaa ku daraan miiraha sawirka, barnaamijkani wuxuu leeyahay algorithm "wax arka" sawirka ka hor inta uusan si buuxda u badalin.
Codsiga miiraha, waad awoodi kartaa xooji saamaynta shaandhada ama yaree, maxaa yeelay tani waxay ku siin doontaa natiijooyin kala duwan. Haddii aad horeyba isugu dartay qaar ka mid ah natiijooyinka lagugu siiyay qabashada cusub, waxaad codsan kartaa miirayaal kale si aad ugu hesho isku-darka qarxa si aad ugu muujiso saaxiibbadaada ama qoyskaaga shabakadahaas bulshada.
Prisma wax badan kama haysto tan, markaa ha filanin dejinta horumarsan, sida awoodda codsigan waxay ku jirtaa algorithm-ka iyo miirayaashaas kaladuwan ee sawiradaada siin doona saameyn xiiso leh. Waa barnaamijkii ugu fiicnaa ee aad u isticmaali karto fasaxan si aad daqiiqadahaas noolaa ugu beddesho sawirro cajaa'ib leh.
Imaanshiyaha cajiibka ah ee ina furaya hab kale oo lagu fahmo miirayaasha iyo sida algorithm ku habboon sawiradaas loo rogi karo qaar aan hore loo maqal. Mid ka mid ah barnaamijyadooda cajiibka ah sida Arts & Dhaqanka.
Download Prism on Android y macruufka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Ku beddelo sawirradaada miirayaasha farshaxannimada leh ee Prisma
Waa inuu haystaa Soo xul: Qaab-dhismeedka Naqshadeynta Tayo-Xeel-dheereedka Adobe Bilaashka ah